पारस शाहको एउटा नराम्रो बानी बताइदिनुहास् भन्दा हिमानी शाहको जवाफ यस्तो आयो ! -
पारस शाहको एउटा नराम्रो बानी बताइदिनुहास् भन्दा हिमानी शाहको जवाफ यस्तो आयो !
हिमानी शाहको जन्म अक्टोबर १, १९७६ मा नेपालमा भएको हो । हिमानी भारतको राजस्थानको शिखर राज्यका राजपुत विक्रम सिहं र विपुला सिहंकी पुत्री हुन् । सूर्यवंशी सिखवत राजपूत उनले ग्यालेक्सी पब्लिक उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकी हुन् । तत्कालिन युवराज पारससंग विवाहबन्धनमा बांधिएसंगै उनी अधिराजकुमारी भइन् । दरबारहत्याकाण्डपछि ससुरा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए, पारस र हिमानी राजउत्तराधिकारी । पूर्व अधिराजकुमारी भएता पनि हिमानी सरल स्वभावकी देखिन्छिन् ।
Previous सावधान! नङ टोक्ने मानिसलाई “पारोनाइसिया” नामक रोगको खतरा, यसरी ज्यानै जानसक्छ
Next सिड्नीमा प्रेमिकाको हत्यापछि नेपालीले गरे आत्महत्या !